I-China Meltblown Abavelisi beendwangu kunye nabaxhasi | Itekhnoloji yeShouzheng
Umatshini ozenzekelayo o-1 + 1
Iigloves ezingasebenzi kakuhle
Umgangatho ophezulu kunye nokulunga emva kwenkonzo yokuthengisa inokuqinisekiswa:
Inkqubo eQhelekileyo yokuLandelwa kweMveliso.
Izixhobo zokuSebenza eziPhucukileyo kunye noMgangatho woVavanyo loMgangatho.
3.Imigangatho yoLawulo lweModern ekhokelwe ngabaNjineli abaPhezulu.
Ixabiso le-4Competitive fektri kunye nexesha lokuhanjiswa ngokukhawuleza.
Igama lemveliso I-Melt-Blown Nonwoven Fabric
Isixhobo Ilaphu elingajikeleziyo
Ubume I-viscose + polyester okanye ehlengahlengisiweyo
Ipateni Ithafile, Mesh, I-Emobossed okanye eyenziwe yenziwa ngokwezifiso
Umbala zimhlophe okanye zenziwe ngokwezifiso
Ubunzima I-20gsm / 25gsm / 30gsm okanye yenziwe yona ngokwezifiso
Ububanzi I-175mm, i-260mm okanye ifakwe ngokwezifiso
Ukusetyenziswa Imaski yobuso, ibhegi, ezoLimo, iZambatho zeKhaya, isibhedlele, iMizi-mveliso, isiVumelwano,
Izicangu, I-Auto, i-Upholstery
Ubungakanani bhegi / umqulu / ibhokisi Ngokwezifiso
Ukupakisha Ifilimu, ibhegi ye-OPP ibhegi, ibhokisi yephepha okanye ezenziwe zenziwa
Inkonzo ye-OEM Ewe
I-MOQ Iitoni ezi-1
Imveliso ekhokelayo Iintsuku ezisi-7 ukuya kweli-15
Iimpawu zokuSebenza ngokuThobekileyo: inokuguquguquka okufanelekileyo, okunokulungelana ngokusondeleyo nolusu kunye nokugubungela igreythi yolusu.
Umsebenzi: Ukuphindaphinda kabini-ubungakanani obuncinci obunokubamba ngcono ukufuma. Ukukhanya, kuthambile, kubonakala. Ilaphu lesuntsu elingenasuntswana liveliswa ngumatshini wamanzi oxinzelelo oluphezulu olungena kwiwebhu, kwaye imicu umoya ngamnye unokwenza i-fiber yokuqala eyomeleleyo ibe yinto eyomeleleyo kunye neyolwakhiwo olupheleleyo.
1) Isixhobo sokucoca isixhobo sokucoca igesi: iimaski zonyango, izinto zokucoca umoya wegumbi Isixhobo sokucoca ulwelo: Ukucocwa kwesiselo, ukucocwa kwamanzi
2) Isixhobo sokunyanga isixhobo seMaski: ngaphakathi kunye nangaphandle kwelenziwe nge-spunbond, embindini ityhidiwe kwilaphu elibhinqileyo.
3) Izinto zokhuselo lokusingqongileyo (izinto ezifunxa ioyile) I-Meltblown nonwovens esetyenziswa ikakhulu kwizinto zePP. Inokufunxa amaxesha angama-17 ukuya kuma-20 ubukhulu kunobunzima beoyile, kukhuseleko lwendalo, unokwenza ukufakwa kuviwe, isihluzo seoyile, njl njl, zisetyenziswa ngokubanzi ekuchitheni ioyile yaselwandle, izixhobo zezityalo, unyango lwamanzi amdaka njalo njalo.
I-4) Izixhobo zokunxiba ziyanyibilika i-nonwovens yi-microfiber ibe ngumnatha, ukuze kube lula ukuziva kwayo. Kwaye ilaphu le-aperture encinci, i-porcious ephezulu, ngokuxhathisa komoya okuhle kunye nokuvuma komoya okuhle, ubunzima bokukhanya, okwangoku benza izinto ezilungileyo kakhulu zokufakelwa iimpahla.
Isicatshulwa seKhaya, ezoLimo kunye negadi, ifenitshala, indawo yokulala, amalaphu etafile, okanye njl.
(20-70gsm): Izembozo zezolimo, ikhava eludongeni, Ezonyango kunye nococeko:
i-diaper yosana, i-cap cap, i-mask, i-gown
(70-100gsm): Impahla yasekhaya: iibhegi zokuthenga, iimpahla eziphathwayo, iingxowa zezipho, isofa
I-upholstery, intwasahlobo- ipokotho, amalaphu etafile
(100-200gsm): Ifestile engaboniyo, ikhava yemoto
Edlulileyo: Ikhadi lokubulala iintsholongwane
Melt Blown ingubo
Melt Blown Indwangu
Indwangu engasetyenziswangayo yokuncibilikisa
Pp Melt Blown Indwangu